Dhallinyaro Soomaali ah oo Fikrad ay Curiyeen ka Helay 66,000$ + Sababta Ka Danbeysay… | Hooyga Barbaarinta Qoyska & Wanaaga Bulshada
Dhallinyaro Soomaali ah oo Fikrad ay Curiyeen ka Helay 66,000$ + Sababta Ka Danbeysay…
Published: January 25, 2017, 1:02 pm
(0) Comments Wiil oo dhalinyaro Soomaali ah oo ka tirsan koox lagu magacaabo FiveID ayaa waxa ay curiyeen fikrad cusub oo ku saabsan quraarad loo isticmaalo cabitaanka, iyagoo ku guuleystay in ay internetka ka urursadaan lacag gaadhaysaa 66,000$.
Dhalinyaradaan oo dhawaan ka qalin-jabiyay jaamacadda Ohio State University ayaa fikradooda cusub waxaay u bandhigeen bogga maalgashiga ee Kickstarter.com
Dhallinyarada Soomaalida ah oo lagu magacaabo Maxamed Raage oo bartay naqshada warshadaha iyo farshaxanka iyo Aadan Cali oo bartay naqshada warshadaha iyo sameynta sawirada dhaqdhaqaaqa ayaa waxay ka mid yihiin kooxda soo saartay quraaraddan cusub iyaga oo sheegeen in aysan suuqa oolin aalad la mid ah.
Maxamed Raage, ayaa ah maskaxda ka dambaysa shirkada iyo agaasimaha shirkada.
quraaradan ay soo saareen ayaa waxay aad u anfacaysaa dadka jecel jdh-dhiska iyo isboortiga iyadoo aad u fududeynaysa qasitaanka cabitaanka proteinka ee la isticmaalo marka aad tababarka dhamaysato.
Bogga Kickstarter ayaa ah bogg caan ah oo u sahlaya dadka fikradaha cusub la yimaada in ay helaan macaamiil ka iibsata wax-soosaarkooda inta aysan soo bixin. Haddii wax-soosaarkaaga uu yahay mid cusub oo dadku ay la dhacaan ayaa Kickstarter waxaad ka ururin kartaa malaayiin dollar
« Warbixinta Ka HoreysayKa Faaideyso Xikmado Qaali Ah Oo Aan Isbuucaan Kuusoo Xulnay, Kobci Maskaxdaada..	Warbixinta Xigto »DAAWO: Mid ka mid ah Raggii laga soo tarxiilay Mareykanka oo Xog ka bixiyey Cidda ka dambeysay in la soo tarxiilo	HADAAD ISTICMAASHO FACEBOOK HALKAAN KU REEB FIKIRKAAGA	Leave a Reply Cancel reply